Ezona ntlobo zeentlanzi zibenazo ekhaya | Ngeentlanzi
Xa sithatha isigqibo sokuba neentlanzi ekhaya, naxa sithatha isigqibo sokuba nenye mascotKubalulekile ukuba sicinge kakuhle malunga noxanduva lokuba nesilwanyana ekhaya. Asinakucinga nje ukuba sifuna inkampani, kodwa nokuba kufuneka sizikhathalele kwaye sizithande ezi zilwanyana, ke kufuneka sicinge ngesingqi sobomi, kwaye ukuba sinako ukubonelela ngononophelo oluyimfuneko.
Ukuba sithathe isigqibo sokuba sifuna ukuba neentlanzi ezincinci ekhaya, kubalulekile ukuba sizazi kakuhle ezi zilwanyana, kwaye sicinge ukuba zeziphi iintlobo ezizokwazi ukuziqhelanisa nesingqi sobomi, kwaye zeziphi Ezona ntlobo zibalaseleyo ukuba sinazo ukuba ngabaqalayo kumxholo wee-aquariums. Kungenxa yesi sizathu, ukuba namhlanje, sikulethele izikhokelo ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ucinga ngokuba neentlanzi ekhaya.
Okokuqala, kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba ukuqala i-aquariumEzona ntlanzi zibalaseleyo sinokuba nazo zezo kulula ukuzondla nokuzigcina, ngaxeshanye zingadingi iimeko ezingqongqo ukuze zisinde, okanye ulwazi oluninzi malunga nomxholo wee-aquariums, iqondo lobushushu lamanzi okanye ubunzima bayo .
Zininzi iintlobo ezihlangabezana nezi mfuno kunye neempawu ezinje ngeDanios, iRasboras kunye nazo naziphi na iintlobo zeBarbels. Ukuba sinendawo enkulu yokubeka iintlanzi zethu ezincinci, sinokukhetha i- intlanzi yomnyama kunye neCorororas, esebenzayo kakhulu kwaye kulula ukuyigcina.
Ukuba, ngokuchaseneyo, sinjalo Iingcali zamanzi Kwaye kwimicimbi yeentlanzi, unokukhetha iintlanzi ezilukhuni kwaye ezinokuziqhelanisa ezifana neLochas, ezibonakaliswa ikakhulu kukutya ukutya okuvela emazantsi e-aquarium. Kubaluleke kakhulu ukuba, ngezi zilwanyana, sinike ingqalelo ekhethekileyo ekutyeni kwazo, kuba zinokuphela zigula kwaye zosulele zonke iintlobo zezilwanyana ezihlala echibini lethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ezona ntlobo zeentlanzi zibenazo ekhaya